Nepali Rajneeti | ‘बढी उफ्रँदा आफ्नै धोती फुस्कन्छ है’ भन्दै बाबुराम भट्टराईले लगाय एमालेलार्इ यस्तो अारोप !
‘बढी उफ्रँदा आफ्नै धोती फुस्कन्छ है’ भन्दै बाबुराम भट्टराईले लगाय एमालेलार्इ यस्तो अारोप !
पुष ७, २०७८ बुधबार २९२ पटक हेरिएको
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले एमालेले लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
पार्टी फुटेको रीस र केपी ओलीको सनकको भरमा एमालेले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएको भट्टराईको आरोप छ ।
‘पार्टी फुटेको रीस र खड्गप्रसादको सनकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महिनौंसम्म सार्वभौम प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाउनु कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? के यही हो उसको जबज ?’
,भट्टराईको ट्वीटरमा आक्रोश पोखेका छन् । यसैलाई नजीर मानेर भविष्यमा अरू प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न नदिए लोकतन्त्र बॉच्छ भन्ने प्रश्न पनि बाबुरामले गरेका छन् ।
उनले एमालेलाई कटाक्ष गर्दै अगाडि लेखेका छन्, ‘बढी उफ्रँदा आफ्नै धोती फुस्कन्छ है !’यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हाल सरकारमा रहेका गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
समाजवादी प्रेस सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले देशभित्र र बाहिर प्रतिगामी शक्तिको खतरा भएकाले गठबन्धनको निरन्तरतामा जोड दिएका हुन्।
उनले एमसिसीलगायतका मु द्दामा गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सानासाना समस्याका कारणले पनि गठबन्धन भत्काउने खतरा छ ।’
अहिलेसम्मको हासिल भएको उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको जोड छ । उन्नत समाज निर्माणका लागि सुशासन, लोकतन्त्र, समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने उनले बताए। कोही पनि निजी स्वार्थमा लम्पसार भएमा अमेरिकादेखि छिमेकी दक्षिणपन्थी शक्तिसमेत हाबी हुने खतरा रहेको उनले औँल्याए।
गत वर्ष पुस ५ गते भएको संसद् विघ टन प्रतिगामी कद्म भएकाले त्यसको विरोध गरेको र अझै पनि प्रतिगमन पूर्णरुपमा अन्त्य नभएको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप थियो । विगतमा पनि पटक–पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको र त्यसविरुद्ध नेपाली जनता लड्दै आएको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष पुस ५ गते भएको संसद् वि घटन वि रुद्ध दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायतले आवाज उठाएको उनले बताए। उनले भने, ‘अझै पनि सबै मिलेर खबर दारी गर्न लाग्नुपर्छ ।’
केही शक्ति अहिले नै उपलब्धि हासिल भइसकेको भनेर त्यसलाई जोगाउनमा जोड दिइरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बताइ। समाज यथास्थितिमा नबस्ने हुँदा उपलब्धि रक्षा गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो खवर साभार गरियको हो ।
अर्थ मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ, नभए प्रधानमन्त्रीले हटाएर छानबिन गर्नुपर्छ : गगन थापा
राजेश हमालको निर्णयले प्रचण्ड खुशीले गदगद, यहाँ बाट लड्नेछन् हमाल चुनाव
ओलीसँग बसेर सँगै दारु खाएको छु थोरै दारू लायो भने जे पनि बोल्छन्: खगेन्द्र संग्रौला